Ogwe igwe H nke dị omimi na-adabara adaba maka usoro mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ dịka ịgbatị, ekwe, crimping, akpụ, blanking, punching, mgbazi, wdg.
igwe na-etinye ibo ụzọ
Igwe a kachasị dị mma maka itinye ọnụ ụzọ ígwè. Akụrụngwa nwere ezigbo nkwụsi ike na oke nkenke, ndụ dị elu na ntụkwasị obi dị elu. The embossing usoro mpempe akwụkwọ metal osobo 3 mgbanwe / ụbọchị mmepụta ..
ZHENGXI HYDRAULIC pụrụ iche imewe ihe Yz 79 haịdrọlik pịa maka NKANOCBOCROC. Ejiri igwe anyị rụọ ọrụ siri ike na ọsọ ọsọ ọsọ, nke nwere ike iru otu okirikiri nke 15 sekọnd, yana ngwa ndị akụrụngwa ji akụrụngwa nwere ike iguzogide nrụrụ. Okwesiri maka imeputa otutu nnu
Akụrụngwa nke igwe: pịa (tinyere ngwugwu waya magnetized), ebe a na-agbapụta hydraulic, ụlọ ọrụ eletriki eletriki, usoro ntụtụ na ịgwakọta, ebe nchekwa agụụ; ebu eku, akpaka ide na-ewe anya igwe.